Onollo: Yemagariro Media Management yeEcommerce | Martech Zone
Kambani yangu yanga ichibatsira vatengi vashoma kuita uye kuwedzera yavo Shopify kushambadzira kwekuedza pamusoro pemakore mashoma apfuura. Nekuti Shopify ine yakadai hombe misika mu e-commerce indasitiri, iwe uchaona kuti kune toni yezvigadzirwa zvakasanganiswa izvo zvinoita kuti hupenyu huve nyore kune vatengesi.
US social social commerce kutengesa ichakura kupfuura 35% kudarika $ 36 bhiriyoni muna 2021.
Kukura kwesocial commerce musanganiswa wemakisheni akasanganiswa ayo enhau enhau ari kubatanidza pamwe nehunhu hwevatengi zvinoshanduka zvinoshamisa pamusoro pegore rapfuura. Uine izvozvo mupfungwa, e-commerce makambani angangoda kugovana uye kusimudzira chigadzirwa chavo nemishandirapamwe nyore. Zvemagariro midhiya manejimendi masystem haawanzo kubatanidza kutora uye kuteedzera yako hesheni uye kutengesa nesocial media… kusvika zvino.
Onollo: Ronga uye Gadziridza Yemagariro Commerce Zvinyorwa
Heino yakakura yekutarisa vhidhiyo:
Onollo inopa akangwara, akasimba akabatanidzwa enhau enhau manejimendi manejimendi kune ako e-commerce zvido, kusanganisira:
Ecommerce Kubatanidzwa - Yakagadzirwa kusangana ne Shopify, Magento, WooCommerce, uye Bigcommerce.
Chigadzirwa Kutumira - Kuwana, kugadzirisa, uye kutsikisa yako chigadzirwa kodhi dhatabhesi nekukanya mashoma. Onollo inoburitsa dhata yechigadzirwa kubva kuchitoro chako nekungodzvanya kamwe chete. Iwe unogona kugadzira zvemagariro enhau zvigadzirwa kutumira pasina kunetesa kurodha pasi kwemifananidzo, kuteedzera-kunamatira zvigadzirwa zvigadzirwa, tsananguro, mitengo, ma URL, zvichingodaro. Tyaira organic traffic yemahara. Udza nyika zvaunotengesa.
Karenda Yemagariro - Gadzira zvemagariro midhiya zvinyorwa zvechero mhando uchishandisa chigadzirwa chigadzirwa kubva kuchitoro chako. Rongedza uye uteedzere ese ako enhau midhiya anotumira pane Onollo karenda.
Kuronga Kwakanaka - Onollo's proprietary AI algorithm inokurudzira nguva yakanakisa yepositi yako inotevera. Kwete zvakare kufungidzira. Zvemagariro midhiya zvinofanirwa kuve nyore.
Autopilot (Mashiripiti Feature) - Ramba uchitumira uchizorora. Autopilot ichatora uye kuburitsa zvirimo zvirimo panguva yakakodzera kune ako ese enhau midhiya netiweki.
Saina Kuti Uwane Yemahara Onollo Akaunti
Tags: AmazonBigCommerceebayFacebookgoogleLinkedInMagentoonolloPinterestshopifyevanhu vezvenhaupasocial media autopostsocial media kalendarimagariro enhau manejimendisocial media kurongaTikTokTwitterWishwixwoocommerce